Qubsuma Koo 15: ''Osoon ijoollee kiyya waliin bakka dawwannaatti of argee natti tola'' - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma Koo 15: ''Osoon ijoollee kiyya waliin bakka dawwannaatti of argee natti tola''
25 Muddee 2017
Image copyright FEVEN TEWELDE
Feevan Tawaldan jedhama. Faransaay magaalaa Paaris keessan jiraadha.
Addana dhufuu kootiin dura bara ALA 2002 Finfinneetti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Liisee G/Maariyaam akkuman barnoota xumureen Yunivaristii Liyoonitti carraa barumsaa argadheen ture.
Ergasii booda ergan digiirii koo kan jalqabaa xumuureen booda, Yunaayitid Kingdam Barmingihaamitti waggaa tokkoof sagantaa waljijjiirraarran ture.
Abbaan warraa koo Paarisitti hojii waan argateef waggaa xumuraa Paarisittiin baradhe.
Anis amma Dhaabbata Barnoota, Aadaa fi Saayinsii Mootummoota Gamtoomanii (UNESCO) tti, kutaa Itoophiyaan bakka buufamtu keessan hojjedha.
Magaalaan Paariis boca dhagaawwanii, kan akka Eefal Taawar, akkasumas bakkeewwan seenaa qabeessaa fi haawwatoo yeroon ilaaluu akkaataa aadaa ishii ittiin ibsitu adda akka ishii taasisu nan yaada.
Nyaata keessaa immoo nyaanni Taahiti Fileet jedhamuufi dinnicha, areeraa fi foonirraa kan hojjetamu gammachuudhaanan nyaadha.
Keessuumaa yeroo qorraa waan ho'aa namaa kennuufi garaas waan guutuuf baay'een sooradha.
Dhimma caalaa Itoophiyaa na hawwisiisu yoo jiraate, isa namoonni walitti dhufanii osoo hin jarjariin taa'anii buna dhugaa haasa'aani sana.
Mana taa'e karaa foddaa mana nyaata qopheessu keessatti wanti alatti natti mul'atu lafa magariisaa xiqqaa, garuu bareedaa ta'eedha.
Kunis waqtiin gaafa jijjiiramu haalli isaa walumaan jijjiirama. Jijjiirama kanas na hubachiisa.
Wanti Paarisitti baay'ee nadhibe tokko isa biyyatti konkolaataas ta'e imala baaburaa irratti namoota gurguddaaf ka'e teessisu na eebbisani sanadha. Asittimmoo isan guddaadha jedhe yaadee ka'eef natti aranii beeku, aadaan adda waan ta'eefu.
Osoo wali hunbeekiin jalaa kaata taanaan, akka waan dadhabaatti isaan ilaalteetti fudhatu waan ta'eef ni aaru malee hingammadan.
Gaafa tokko garuu yeroon miilaan gara manaa galaa jiru, jaartii tilmaamaan umurii 90 ta'an tarkaanfachuu dadhaban argeen itti siiqe.
Dhuguma edaa isaaniis deeggarsa barbaadani turan. ''Adaraakee mataa na naanneessaa, na kuffisaa jira hanga manaatti na gaggeessi,'' naan jedhan. Yeroo isaan kana jedhanis,kananii biyyatti nama gargaare na eebbisan sana yaadadhe.
Nuyiifi jarri Faransaay wanti itti wal fakkaannu tokko, ilaalcha nuti aadaa keenyaaf qabnuudha.
Goodayyaa suuraa Feeban abbaa waraa fi ijoollee ishee waliin
Akka lammiilee Itoophiyaa hedduu aadaan isaanii kan isaan boonsuufi ummata kaan irraa akka adda ta'etti yaadu. Ejjannoon isaanii kuni qarooma booda kanaan baduu dhabuun isaa nadhiiba.
Kan biraa kan biyyaa kan na yaadachiisu manneen nyaataa aadaa 14 ta'aniidha.
Godaambaa keessattis dhimmoonni waa'een seenaa fi aadaa Itoophiyaa kan yaadachiisan jijjiru.
Hanga yoonaa yeroon turtii Faransaay keessa taasiseetti, wanti na gaabbisiisu tokko jira. Innis barumsa koo akkuman xumureen osoon CV koo barreessaa jiru, ogganaan lafa itti hojii umuriikoo arge lafa gaa'iila jedhutti hin heerumne jedhee guuti natti himan.
Yeroos umuriin koo 26 ture. Maaliif jennaan heerumteetti kee yoo beekan itti aansee nideessis jedhanii waan yaadaniifuu hojii argachuun rakkoo sitti ta'uu mala naan jedhe.
Awuroppaa qaroomte jedhamtu keessatti mirgi dubartootaa ifumaan akka cunqurfamu hubachuun na rakkisee ture.
Kanaan alatti magaalaa Paaris keessatti osoo waan jijjiiru tokko qaba ta'e, mana waliinii gamoo tokkorra jiraatan dhiise akkuma Itoophiyaa mana dallaa qabu osoon qabaadhe nan hawwa.
Kana gochuuf immoo lafa hojii kootii fagaadhe hanga mana gahutti yeroo najalaa fudhata.
Haa ta'u malee, ijoollee lama waan qabuuf yoon fagoo deeme kan ijoollee naa qabu na barbaachisa.
Gama kaaniin, yeroon ijoollee koo waliin dabarsu waan xiqqaatuuf ijoollee koof nan caalsifadha.
Osoon maatii kiyya waliin biyya Itoophiyaatti lafa bashannanaatti ofi argee natti tola ture.
Qubsuma Koo 14: "Qorri cimee, guyyaan yoo gabaabattu biyyaa koon yaada"
18 Muddee 2017
Qubsuma koo 13: 'Anaaf milkaa’uu jechuun qarshii argachuu qofaa miti'
11 Muddee 2017
Jiraattota gaaffii aanaa ta'uuf deebii dhabaniin daandiin Maqalee geessu akkuma cufatetti jira
Gatii intarneeta ugguruun Itoophiyaa baasisu
'Itoophiyaatti waggaatti namoonni 8,000 lubbuu ofii balleessu'
Puutiin eenyu? Maal barbaada?
Namni gabaabaan addunyaa keenyaa du'aan boqote
'Manni murtii Yaasoo Kabbabaa akka bahu ajajus pooliiin gadhiisuu dide'
Miseensi paarlaamaa mana dhugaatiitti rasaasaan nama dhahan
Gondaritti shakkamtootni ayyaana Cuuphaa irratti haleellaa raawwachuuf qophaa'an to'ataman
Wixineen ashuuraa fooyya'e maal maal ofkeessaa qaba?